ကင်မရာ Sensor Size နဲ့ Image Quality – DigitalTimes
ကင်မရာ Sensor Size နဲ့ Image Quality
ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပုံအရည်အသွေး၊ အရောင်ထွက်ကောင်းမကောင်း၊ အသေးစိတ်ကျမကျ၊ noise ကင်းမကင်း ဒါတွေအားလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးက Sensor Size ပါ။ ဒီနေ့အတွက်ကတော့ Camera Sensor တွေနဲ့ Image Quality တွေအကြောင်း အခြေခံလေးတွေ ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
Camera Sensor & Image Quality
ဓာတ်ပုံပညာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ ကင်မရာရဲ့ sensor size တွေအကြောင်းနဲ့ သူတို့တွေက ဓာတ်ပုံပညာမှာအရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ ကင်မရာ sensor တစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုနားမလည်ထားရင် ကင်မရာ setting ရဲ့ ISO, Shutter speed, f-stop တွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကင်မရာ Sensor ဆိုတာ?
Image Sensor လို့သိကြတဲ့ ကင်မရာ sensor တွေဆိုတာက ဥပမာ- ကင်မရာရဲ့အလင်းဝင်ပေါက် “aperture” ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ အရောင်၊အလင်းပြင်းအား စတဲ့အလင်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရယူပေးပါတယ်။
“Shutter Speed” ကတော့ ကင်မရာ sensor ကနေ ဒီအလင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ရယူလိုက်တဲ့ကြာချိန်ပါ။
“Image Sensor” တွေမှာ နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ CMOS sensors( complementary metal-oxide semiconductor) နဲ့ CCD sensor (Charge-coupled device) တွေပါ။
Low-light မှာရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့ CMOS sensor တွေက စွမ်းဆောင်ရည်လည်းပိုကောင်း ဈေးလည်းပိုသက်သာတဲ့အတွက် အခုခေတ် ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာအားလုံးလိုလိုမှာ သုံးလာကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံပညာမှာ Pixel ဆိုတာ??
ကင်မရာ sensor တွေဆိုတာက လေးထောင့်အပြားလေးဖြစ်ပြီး သူ့မှာ သေးငယ်လွန်းတဲ့လေးထောင့် pixel ေပါင်းသန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။ pixel တွေကို အလင်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ pixel တစ်ခုချင်းစီကိုသုံးပြီး ရှုခင်းတွေမြင်ကွင်းတွေရဲ့ အရောင်တွေ tone တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်တာ ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာပါ။ ပုံတစ်ပုံရဲ့ pixel တစ်ခုချင်းစီမှာ ၁ရောင်ပဲပါပြီး ဒီသန်းပေါင်းများစွာသော pixel တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်မှ ပုံတစ်ပုံဖြစ်လာတာပါ။
ပုံတစ်ပုံကို သေချာအသေးစိတ်ချဲ့ကြည့်လိုက်ရင် အရွယ်တစ်ညီတည်းလေးထောင့်ကွက်ပေါင်း သန်းနဲ့ချီရှိနေတာကို တွေ့ရပါလိ့မ်မယ်။ ချဲ့ရင်းချဲ့ရင်း pixel တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရွယ်အစားထိမြင်လာရပြီဆိုတဲ့အချိန် သေချာကြည့်ကြည့်ရင် pixel တစ်ကွက်မှာ အရောင်တစ်ရောင်ပဲပါတာတွေ့ရပါမယ်။
ကင်မရာ setting, shutter speed, ISO, f-stop တွေကိုသာမှန်မှန်ရွေးနိုင်ခဲ့ရင် sensor grid ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ pixel တစ်ခုစီတိုင်းက တိကျမှန်ကန်တဲ့အရောင်ကိုရယူနိုင်ပြီး image grid ပေါ်မှာသွားသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရယူနိုင်တာကိုတော့ ဓာတ်ပုံပညာမှာ “correct exposure” လို့သိကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အတွက် အဓိကအရေးကြီးဆုံးက တိကျမှန်ကန်တဲ့အရောင်တွေရယူနိုင်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့ camera setting ကိုရွေးတတ်ဖို့ပါပဲ။
ဒါကတော့ ကင်မရာ sensor, image quality နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ Megapixels ေတွအကြောင်း အရောင်တွေအကြောင်းနဲ့ ကင်မရာ sensor တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။
Tags: Camera Sensor, Photography
Galaxy S9 ထက်ပိုများတဲ့ 4000mAh ဘက်ထရီနဲ့ Samsung Galaxy S9 Active
Google နဲ့ပေါင်းပြီး တန်ဖိုးနည်း Android Go ဖုန်းကိုထုတ်တော့မယ့် Meizu